Archive du 20191001
Ho avy ny fifidianana Raikitra indray ny an-kizarazara
Mbola amin`ny 27 novambra izao ny fifidianana kaominaly sy monisipaly, nefa mandeha sahady ny fampielezan-kevitra ataon`ny antoko sasany sy ny fitondrana.
Andry Rajoelina Mila mitandrina
Tsy misy zavatra tongatonga ho azy amin’ny politika fa misy ny kajy sy ny paikady mipetrapetraka.
Fanatanjahantena Azo avadika ho fandraharahana
Tanora misehatra amin’ny fanatanjahantena miisa 60 no mandray anjara amin’ny fampiofanana karakarain’ny “La maison de sport” mandritra ny herinandro.
Olana ara-tsosialy Tsy manana vahaolana matotra ny fitondrana
Latsaka anaty fahasahiranana lalina ny vahoaka, raha ny fiainana sosialy. Eo, ohatra, ny fiakaran`ny vidim-piainana : saran-jiro sy rano, vidin`ny arina fandrehitra…
Fikambanana ROAD Mitaiza ny olom-pirenena mba ho tompon’andraikitra kokoa
Ny “Responsible People Acting for Development” na ROAD dia fikambanana niforona ny volana jolay 2019 rehefa avy nahita sy niaina ny fasahiranana misy teo anivon’ny fiarahamonina Malagasy ny mpiara-mianatra tao amin’ny ESSAgro, ISPM ary STICOM.
SOS Village d’enfant Nitaiza ankizy 50 000 tao anatin’ny 30 taona
913 ireo zaza kamboty noraisin’i SOS Village d’enfant Madagasikara. 1992 kosa ny fitambaran’ireo zaza sy tanora nampianarina. 19 308 ireo nahazo fiahiana ara-pahasalamana. ary 22 194 no nahavitana taratasy.